Indida kodutshulwe esemzini wakhe eGrange | News24
Indida kodutshulwe esemzini wakhe eGrange
ASHAQEKILE amalungu omphakathi wase The Grange emuva kokudutshulwa kubulawe owesifazane wakulendawo emzini wakhe ku-Langford Road ngoLwesibili ekuseni.
Ngesikhathi i-Maritzburg Echo ihambele kulendawo omakhelwane bebesayikhulumela phansi indaba yokudutshulwa ngesihluku kuka Nkk Ntokozo Xulu (48), okuthiwa ungenelwe umlisa ongaziwa wamdubula amahlandla amabili ekhanda washonela kusofa egumbini lokuphumula.
Ngesikhathi leliphephandaba lihambele umndeni wakwa Xulu lifice amalunga amabili omndeni wakhona abeqoqa izimpahla endlini nathe awanalo igunya lokukhuluma nabezindaba njengoba umndeni ungakapheleli.
Omunye womakhelwane othi ubekhona kade kwenzeka lesigameko uthe umbonile umufi obengumhlengikazi e-Greys ephuma emotweni yakhe ekuseni kade evela emsebenzini.
“Besizihlalele nje emgaqweni sidlala amakhadi ngesikhathi ngimbona usisi Ntokozo ehla emotweni yakhe ekuseni evela emsebenzini, engikunakile ukuthi akafikanga ngesikhathi ajwayele ukufika ngaso. Uthe mayehla wabingelela njengenjwayelo maqede wakhuluma nogogo wakwamakhelwane wathi esengaphakathi esangweni kwaqhamuka omunye ubhuti nje baba ngengxoxo emfishane maqede usisi wangena ngaphakathi endlini.”
Lomakhelwane uthi kushuthi ngesikhathi benganakile lendoda ebihamba yodwa ijombe uthango yangena ngaphakathi nokuyilapho ifike yadubula khona uXulu obehleli kusofa.
“Sikuzwile ukuqhuma kwesibhamu kodwa sanganaka ngoba besingazitsheli ukuthi ngabe sekudutshulwa usisi uNtokozo. Kushuthi siqhume kancane ngoba nabanye omakhelwane abaseduze bathe abezwanga lutho. Ngisho esehamba lomlisa udlule phambi kwethu eshaya kancane futhi asizange sinake ngoba besingazitsheli ukuthi ngabe esenze into efana nalena.”
Uthi emuva kwesigameko babone ngomfawobaka mufi ephuma ngesamagundane endlini ejombela kwamakhelwane wabe esephumela kubona emgaqweni ebacela ukuthi bafonele amaphoyisa ngoba sekudutshulwe udadewabo.
“Umfowabo uthe ubesegumbini lakhe lokulala ngesikhathi ezwa kuqhuma isibhamu ngaphakathi endlini. Emuva kwalokho uthi uzwe sekukhala isango wakwazi ukuthi aphume ngasekhishini wajombela kwamakhelwane wabe esecela usizo. Sikwazile ukuthi sizame ukumjaha nabanye abafana basendaweni kodwa ubalekile wabe esengena emotweni yohlobo lwe-VW Polo emnyama ebimlindile yabaleka yashona ngase France.”
Lomakhelwane uthi ngaphambi kwalesigameko leli-Polo balibonile lizulazula kulomgwaqo kodwa banganaka. Uthi ngisho omunye umlisa wabebehamba ngalo uphumile wayothenga ugwayi esitolo esikuwona lomgwaqo.
“Asikwazanga ngisho ukuthatha i-number plate yayo lemoto kade simjaha lomlisa ngoba bese ikhishiwe futhi nathi sisabile ukusondela eduze ngoba labantu bekusobala ukuthi bahlomile.”
I-Maritzburg Echo ihoshe ukuthi uNkk Xulu ubulawa nje ubesephezu kwezinhlelo zokwehlukanisa nomkhwenyana wakhe kanti ubenabantwana ababili.
Abezimo eziphuthumayo bakwa ER24 babike ukuthi bafike endaweni yesigameko emuva kwehora lesishiyagalombili ekuseni.
“Sifice owesifazane enenxeba lokudutshulwa ekhanda elele kusofa. Ngesikhathi simhlola ubesevele edlulile eshonile kungasekho okungenziwa,” kusho isitatimende.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uLt Colonel Thulani Zwane uthe okwamanje imbangela yokubulawa kukaXulu abingakaziwa kodwa amaphoyisa ase-Alexandra aphenya icala lokubulala.